पत्नीले धोका त दिइरहेकी छैनन् ? spacekhabar
प्रतिकात्मक तस्बिरहरु ।
पतिपत्नीको सम्बन्ध सबैभन्दा उत्तम र पवित्र मानिन्छ । तर, कहिले–काहीं भने पतिपत्नीबीच अविश्वस उत्पन्न हुँदा सम्बन्धमै दरार आउँछ ।
वैवाहिक सम्बन्ध टुट्नुमा पतिपत्नी दुवैको कमजोरी हुन्छ । तर कतिपय अवस्थामा भने पतिले पत्नीको ख्याल नगर्दा पत्नीले आफ्नो पतिभन्दा पनि अरुलाई विश्वास गर्दा सम्बन्ध धरापमा पर्ने खतरा हुन्छ ।
हिजोआज विकराल बन्दै गएको समस्या के पनि हो भने विभिन्न कारणले पत्नी अर्कैसँग सल्किनु अर्थात् लहसिनु । पत्नी अर्कैसँग लहसिन थालेको पहिले नै थाहा पाउन सक्यो भने त्यसबाट हुने क्षतिबाट बच्न सकिन्छ ।
पत्नी अर्कैको संगतमा लागेको थाहा पाउन केही गतिविधि गर्छन् । हाउभाउमा परिवर्तन तथा बोलीवचनमा परिवर्तन आयो भने पनि पत्नी अरुकै प्रेमजालमा छिन् भन्ने पत्ता लाग्छ ।
केटी साथीसँगको घुलमिल बढी
पत्नीका केटी साथी कति छन् ? केटी साथीसँग पहिलेभन्दा बढी समय बिताउँछिन्/बिताउन्नन् ? कतै केटी साथीलाई भेट्न जाने भनेर अरु कसैलाई भेट्न त गएकी छैनन् ? केही समयअघिसम्म बेलुकी अरुसँग समय नबिताउने पत्नी धेरैजसो समय बाहिरै बिताउने गर्न थाल्छिन् भने तपाईंमाथि धोका भइरहेको हुनसक्छ । तपाईंकी पत्नी केटी साथीहरुसँग नभई अरु कुनै मानिससँग समय बिताइरहेको हुनसक्छ ।
सधैं फोनमै झुन्डिनु
तपाईंको पत्नी फोनमा कत्तिको झुन्डिन्छिन् ? तपाईंको अगाडि फोन आउँदा उनको हाउभाउमा कुनै परिवर्तन आउँछ/आउँदैन ? बारम्बर फोन आइरहने फोन, स्वरको परिवर्तन, म्यासेज गर्ने प्रवृत्ति, रातिराति पतिको शंकाले फोन चेक गर्नु, बोल्ने शैली परिवर्तन गर्नुले पनि पतिलाई पत्नीले गुमराहमा पारेको छ÷छैन भनेर थाहा पाउन सकिन्छ । फोन आएको बेला आवाज कम गर्ने, पति कोठामा भए बाहिर गएर कुरा गर्छिन् भने सम्झिनुस्, उनको नियत ठीक छैन ।
नुहाउने र जिम
विगतमा दिउँसो नुहाउन अल्छी मान्ने तपाईंकी पत्नी घर फर्कने बेला नुहाएर आएको जस्तो देखिन्छिन् ? के उनी पहिलेभन्दा बढी समय जिम जाने गर्छिन् ? सम्झिनुस् त्यहाँ तपाईंलाई गुमराहमा राखिएको हुनसक्छ ।
पत्नी पहिलो अहिलेमा कत्तिको बासनादार हुने गर्छिन् ? उनीबाट महिलाभन्दा पुरुषको बास्ना बढी आइरहेको छ ? उनको यो नयाँ बास्ना महिलाभन्दा पुरुषको बढी हो कि, अथवा त्यस्तै खालको बास्ना आफ्नो कुनै साथीको हो ?
पहिला आँखा जुधाएर कुरा गर्ने तपाईंकी पत्नी अहिले कुरा गर्दा एकाएक यसो गर्न बन्द गरेकी छिन् भने होसियार हुनुहोस् ।
कतै तपाईंको पत्नीले तपाईंलाई झारा टार्ने गरी शारीरिक सम्बन्धमा साथ मात्रै त दिएकी छैनन् ? के उनको सेक्सप्रतिको रुचि पहिलाको तुलनामा कम छ ? के उनले तपाईंले चाहेको तरिकामा सेक्स कार्यमा सहभागी बन्दिनन् । त्यसो भए उनीमा शंका गर्ने आधार धेरै हुन्छन् । अर्थात तपाईंमाथि पत्नीले धोका दिइरहेकी हुन सक्छिन् ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक ३०, २०७६, १२:३५:००